Jabulela iholide ongenakulibaleka e-Grandvalira ski resort | Izindaba Zokuhamba
UMonica sanchez | | Andorra, Ukuzilibazisa
Ngemuva kokuchitha ihlobo elishisa kakhulu, sekuyisikhathi sokulungiselela lokho ngokungangabazeki okuzoba yiholide elingenakulibaleka. Kuphi? Vuliwe Grandvalira, lapho ungazijwayeza khona umdlalo wasebusika: ukushushuluza eqhweni. Kepha hhayi kuphela lapho uzokwazi ukuzijabulisa ngenkathi uzivivinya imilenze nezingalo ngebhodi lakho lokushibilika eqhweni, kodwa futhi uzoba nethuba lokubona indawo enhle eneqhwa yaleli kona lase-Andorra.
Ngakho-ke, ukuze ungakhohlwa lutho, ake ngikusize udwebe uhlu lwezinto ozozidinga ukuqeda unyaka ngendlela engcono kakhulu: ngememori ekhethekile yezinsuku zakho eGrandvalira ezigcinwe engqondweni yakho.
1 Iyini futhi ikuphi iGrandvalira?
2 Yimiphi imisebenzi eyenziwa ebusika?
3 Yini engiyidingayo ukuya eGrandvalira?
4 Ungaqasha kuphi impahla?
Iyini futhi ikuphi iGrandvalira?
Kuyisikhungo sokushibilika e-ski esakhiwe ngonyaka we-2003 esisePyrenees, ngaphakathi kwePrincity of Andorra. Yindawo enkulu yokushushuluza ePyrenees, njengoba inemithambeka engaba ngu-210km, esuka enkabeni yezwe iye empumalanga, ifinyelela umngcele neFrance. Ingatholakala ngezindlela eziyisithupha ezihlukile, kulandela inkambo yomfula iValira de Oriente, okuyilezi: Pas de la casa, the UGrau Roig, the USoldeu, I-Tarter, the Canillo futhi i Encamp.
Ukuphakama okuncane kungamamitha ayi-1710, kanti ubukhulu bungu-2560m. Futhi inezinganono zeqhwa eziyi-1027 zokufakelwa, ezithatha indawo eyi-136km. Ngakho-ke, ungalijabulela iqhwa ngaphandle kokukhathazeka nganoma yini, ngoba izinsizakalo eziningi zinikezwa ukuze isivakashi sikwazi ukuchitha izinsuku ezithile ezimnandi, nomndeni noma nabangane. Imisebenzi efana indawo yokudlela, yokudlela, usizo lokuqala, indawo yokudlela esheshayo, enkulisa, ski / iqhwa esikoleni, ukupaka, futhi kunjalo izindlu zangasese.
Yimiphi imisebenzi eyenziwa ebusika?
Phakathi nezinyanga zasebusika, kunemisebenzi eminingi nehlukahlukene eyenzeka maphakathi nale ndawo enhle eneqhwa. Baningi kakhulu, kangangokuba nalabo abangathandi ukushushuluza noma abathanda ukwenza ezinye izinto, bangaba nesikhathi esihle.
Isibonelo, ungajwayeza ukuxhuma, isihlibhi esidonswa yizinja, hamba nge-snowmobile, ukushushuluza unqamule izwe noma ukushushuluza ebusuku, kucofe, hamba isifunda se-adventure, funda ukushushuluza endaweni yabaqalayo ngosizo lukathisha,… Ngamafuphi, njengoba kuningi okumele ukwenze, ngeke uze ube nesikhathi sokucabanga ngesithukuthezi 😉.
Yini engiyidingayo ukuya eGrandvalira?
Okungeke kulahleke esikhwameni sakho sokuvakasha yilokhu okulandelayo:
Umazisi: ukufika eGrandvalira kufanele uye e-Andorra, futhi leli izwe elingadingi i-visa yanoma iluphi ubuzwe. Okubaluleke kakhulu ukuthi uphathe umazisi noma ipasipoti esemthethweni nencwadi yomndeni.
Izingubo zangaphandle ezishisayo: ebusika, futhi ngaphezulu ezindaweni eziphakeme kakhulu, izinga lokushisa, kokubili ubuncane nokuphakama, liphansi kakhulu, kangangoba lingafinyelela kalula -10ºC. Ngakho-ke, ukuze ugweme imikhuhlane, kufanele ugqoke izingubo ezishisayo nazo ezikahle, njengalezo ozozithola ezitolo zezemidlalo.
Ikhamera yezithombe: Uma usohambweni, ikhamera iyinto ebalulekile yokubamba izikhathi ezinhle kakhulu. Qiniseka ukuthi uhamba neshaja ukuze uhlale ulungile.
Ifoni yeselula: yize sazi ukuthi awuyishiyi ekhaya, kubalulekile ukuthi uhlale unayo ibhethri eligcwele nokuthi uhamba nayo, ngoba ngeke kukusize kuphela ukuxhumana nabantu obathandayo, kepha izosiza kakhulu uma kunesidingo.
Isikrini selanga: ilanga, noma lingagadli kakhulu, lingalimaza isikhumba. Ngenxa yalesi sizathu, kunconywa ukuphatha ibhodlela likakhilimu ukuze ulibeke ebusweni nasezandleni zakho.
Izibuko: amehlo enkosi yenkanyezi nawo kufanele avikelwe.
Ngifuna ngempela ukuzijabulisa: kulungile, kulungile, kunengqondo. Kepha kungenye yezinto ezibaluleke kakhulu, uma kungenjalo kakhulu, ngoba kuzoxhomeka kakhulu ekutheni izinsuku zakho e-ski resort ziyamangalisa yini.
Ungaqasha kuphi impahla?
Uma ungenayo, noma ungafuni ukuchitha isikhathi ungena, ungaqasha impahla kusuka ukushushuluza e-Grandvalira. Ungaba namabhuthi akho, namabhodi okushibilika eqhweni noma eqhweni ngokuya kwesinye sezitolo eziningi endaweni yokushibilika eqhweni; ngisho nasemahhotela baphinde bacubungule le nsizakalo kumakhasimende abo, futhi okokugcina banikela izaphulelo ezitolo eziseduzane nendawo yokuhlala.
I-Skis: kusuka kuma-euro angama-16 (lawo asesigabeni seBronze), ama-euro angama-21 (Isiliva) nama-euro angama-27 (Igolide).
Snowboard izingane kuze kube yiminyaka engu-12: 18 euro.
Amabhuthi e-ski: kusuka ku-9,50 euros (Isiliva) kuya ku-11 euro (Gold).
Amabhuzu ezingane kuze kube yiminyaka eyi-12: Ama-6 euros.
Isigqoko sabantu abadala: Ama-5 euros.
Isigqoko sokuzivikela sezingane: Ama-3 euros.
Ama-Rackets: Ama-10 euros.
Ngendlela, kufanele wazi ukuthi uma wenza iqembu elenziwe ngabantu abangaphezu kwama-30, uzoba nezaphulelo ezikhethekile.
Ngakho-ke akukho lutho, uma ufuna ukuchitha izinsuku ezimbalwa kwenye yezindawo zokuvakasha ezingamaSki ezaziwa kakhulu emhlabeni, iya eGrandvalira. Ngeke uzisole 😉.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » Andorra » Jabulela iholide ongenakulibaleka eGrandvalira
Izinto okufanele uzenze eJamaica
Amabhishi amahle kakhulu eGalicia